OS အကြမ်းဖျင်း အမြည်းလေးတွေ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Copy/Paste » OS အကြမ်းဖျင်း အမြည်းလေးတွေ	13
Wai Phyoe has written 37 post in this blog.
View all posts by Wai Phyoe →	Blog
ster says: ကိုယ်သိတာတွေ ပြန် share ပေးလို.ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ko wai phyoe ရေ။ မဆက်တော.ဘူးလား။ အမြည်းလေးပဲလား။
Wai Phyoe says: လောလောဆယ်တော့ အမြည်းလေးပဲ Sterေ၇………..နောက်နေ့မှ အ၀ အ၀
သားဦး၊မြေးဦး says: iOS သာသုံးပါသည်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1267
ကြောင်ဝတုတ် says: Linux, Mac OSX တို့က Unix ကိုအခြေခံထားသော OS များဖြစ်သောကြောင့် Security တော်တော်လေး ကောင်းမွန်ပြီး၊ ကွန်ပျူတာရဲ့ Performance ကိုလဲ သိပ်မသုံးတာတွေ့ရပါတယ်…
Azzurri says: OS အကြောင်း ပြောရင် Kernel ကိုချန်မထားစကောင်းလို့
ကြောင်ဝတုတ် says: ကာနဲကိစ္စထည့်ပြောဦးမလို့…
Azzurri says: အရီးလတ် က သူများသာပြောတာ…
Was this answer helpful?LikeDislike 9939
မောင်ပေ says: ကျုပ်ကတော့ ဖတ်ရုံဘဲ ဖတ်တတ်တယ်ဗျို့ ။
cum min says: နောက်လဲတင်ပေးပါဗျာ….
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 58
first last says: somebody told us about myanmar os (myanmar language os)
mamanoyar says: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် နောက်လဲမျှဝေပါဦးနော်
သားဦး၊မြေးဦး says: ကျနော်လဲ ပန်းသီးဘဲ မစားချင်စားချင်နဲ့ ဆက်စားပါတော့မည်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 40
Mr admin says: Linux ပါ .. သို့သော်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Microsoft ကိုမခွာနိုင်ဖြစ်နေရပါသည် ဟိဟိ